China HY288 Warp knitting Machine emeputa na soplaya |Aoyuan
Nke a igwe looping ịkwọ ụgbọala akụkụ nakweere planar njikọ rad usoro, n'ala bar nakweere N ụdị ụkpụrụ diski cam shogging ngwaọrụ.
Nke a igwe looping ịkwọ ụgbọala akụkụ nakweere planar njikọ rad usoro, n'ala bar nakweere N ụdị ụkpụrụ diski cam shogging ngwaọrụ.beam yam na-eji EBC eletrọnịkị ahapụ, ngwaọrụ traction na-eji rola anọ, ma na-enyekwa traction rola atọ, igwe nwere ike họrọ jacquard nwere akụkụ abụọ.
Igwe eji akpa akwa na usoro agha agha na-abụkarị nke usoro ndọpụ anya, usoro akpa akwa, usoro traverse, eserese na iwere, usoro nnyefe na usoro inyeaka.Usoro nke akpa akwa bụ isi usoro ya, nke a na-eji emepụta eriri akwa.Dị ka ụdị agịga dị iche iche a na-eji na-akpachi anya, a na-anabata akụkụ looping dị iche iche.The looping akụkụ tumadi na-agụnye knitting agịga, sinkers, okporo strippers, yarn ndu agịga, wdg The ụdị nke agịga eji warp knitting igwe bụ ihu ọma otu ndị na-eji na weft knitting igwe, ma ọtụtụ oge a warp knitting igwe na-achụso elu ọsọ. ya mere, a na-eji agịga mejupụtara ọtụtụ ebe, ebe a na-ejikarị agịga ire eme ihe na nnukwu igwe jacquard warp knitting.
N'iji maka ịkwa akwa nso ma ọ bụ ntupu na-agbanwe na akwa oghere oghere, a na-eji ngwaahịa ndị a eme ihe maka akpụkpọ ụkwụ, akpa, oche ụgbọ ala, okpu, uwe na ihe ndị ọzọ.
Agịga gbajiri agbaji
Nke gara aga: HY399 igwe eji akpa akwa Warp na-agba otu akwa
Osote: HY280 nnukwu ọsọ otu akwa raschel